असार १०, २०७६ बलिराम यादव
पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं. ३ पदमौल गम्हरिया टोलमा जन्मेका १४ श्याम श्याम भन्ने श्यामसुन्दर यादव होली ल्याण्ड ईङ्गलिश बोर्डिङ्ग स्कुलको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्र हुन । २ भाई र १ बहिनीमध्येको जेठो छोरा हुन श्याम यादव । उसका १ भाई र १ बहिनी गाउँकै बोर्डिङ्ग स्कुलमा अध्ययनरत छन् । बुबा हरिश्चन्द्र प्रसाद यादव पक्की घर निर्माण गर्ने ठेक्केदार हुन भने आमा लिलावती देवी गृहणी हुनुहुन्छ । उनका चाचा गौरिशंकर यादव जोटा हेल्थ केयर जनकपुरमा एम आर को काम गर्छन् ।
हजुरबुबा र चाचा सहितको सानो परिवार छ उनको । पढ्न र खेल्न उत्तिकै रुचाउने श्याम ज्ञानी स्वभावका छात्र हुन् ।
आफू चाचासंग बैकमा जादाँ वैङ्गमा कार्यरत कर्मचारीहरुले लगाएको पोशाक कोट पाईन्ट र एसीमा बसी पैसा गनेको देखेकोले आफू पनि भविष्यमा बैंकको म्यानेजर बन्ने उद्देश्य रहेको बताए । आफू म्यानेर बन्ने सोच भएपनि गणित विषय खासै मन नपर्ने र एकदमै गाह्रो हुने विषय भएपनि मेहेन्नत र लगशिलताले सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढिरहेको उनले बताए । उसलाई सबैभन्दा बढि मन पर्ने सजिलो विषय अंग्रेजी र साइन्स भएको बताउँछन् । हामीलाई हँसाएर पढाउने, खेलाउने र चुट्कीलाहरु सुनाउने भएकोले सुवास सर आफ्नो मनपर्ने सर हो । मलाई उहाँले पढाएको एकदमै मनपर्छ । म संगै बस्ने, सबै सियर गर्ने, हसाउँने र म गएल भएको समयको सबै गृहकार्यहरु कमप्लीट गरिदिने कौशल साह मेरो मिल्ने साथी हो । उसले थपे ।
दूध र दही सानैदेखि नखाएका श्याम माछा र करेला भनेपछि नाक खुम्चाउने तर लड्डु खान पाए अरु केही नचाहीने श्याम विद्यालयमा हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा खेलकुदहरुमा एकदमै क्रियाशिल देखिन्छन् । उसलाई पढ्न बस भनी अह्राउन पर्दैन । विद्यालयबाट आई आफ्नो पोशाक फेरेर खाजा खाई पढ्न बस्ने उसको राम्रो बानी छ । सबै गृहकार्य सकिसके पछि मात्र उनी साथीहरुसंग ब्याडमिन्टन र लुकामारी खेल्न जान्छन् । आफ्नो हेरचाह गर्ने, नजानेको कुरा सिकाउने, र आफूलाई आवश्यक सामग्री ल्याईदिने भएकोले आमाको बढी माया लाग्ने बताउँछन् उनी । म खाली समयमा घर गई आमालाई घरको काममा सघाँउने पनि गर्छु ।
उसको आमाले भनिन् अलि जिद्दी स्वभावको छ तर मैले भनेको मान्छ । खाना खानलाई पनि त्यती कर गर्नु पर्दैन । उसलाई भोक लागेको छ भने खान्छ नभए पछि खान्छु भन्छ । उसलाई मैले पढ्न बस भनेर कराउनु पर्दैन । उ आफै बस्छ । घरमा हुँदा कि त साथीहरुसंग खेल्न जान्छ कि त मोवाईलमा युटुब बाट हेर्दै क्राफ्ट बनाएर बस्छ । म उसको पढाईबाट एकदमै सन्तुष्ट छु । अरु भन्दा पनि पढाई प्रति उसको रुचि देखेर म छक्क पर्छु । परीक्षा सुरुहुनु भन्दा एकमहिना अघि देखि उ तयारीमा लाग्छ ।निजी विद्यालयमा जस्तो राम्रो पढाई र हेरचाह सरकारी विद्यालयमा कहाँ छ र ? राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि त हामीले निजी विद्यालय रोजेका हौं ।
हामीले त उले चाहेको जस्तो शिक्षाको लागि लगानी मात्रै गर्ने हो । उसको लक्ष्य अनुसारकै शिक्षा दिनु पर्छ । त्यसैले उनसलाई जे बन्न मन छ त्यही बनोस ।
मगलवार, असार १०, २०७६, ०४:०६:००
श्रावण १६, २०७६ बलिराम यादव